Jiraattotni mgaalaa Hawaasaa 300 beenyaa lafaa osoo hin fudhatiin waggaa sadii ture jedhan | Addis Maleda
መነሻ ገጽAfaan OromooOduu AbooliiJiraattotni mgaalaa Hawaasaa 300 beenyaa lafaa osoo hin fudhatiin waggaa sadii ture...
Naannoo Sidaamaatti Jiraattotni magaalaa Hawaasaa Ganda Caffee keessa jiraatan 300 misoomaaf jedhamee lafti isaanii erga irraa fudhatamee waggaa sadii lakkoofsisus beenyaan kan hin kanfalamnerf ta’uu Addis Maaledaatti himaniiru.
Jiraattotni naannawichaa Addis Maaledaatti akka himanitti,Naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaa Ganda Caffeetti namoota 300 irraa lafti qonnaa fi bakki mana jireenya ji’oota jalqabaa bara 2011 irraa eegalee ijaarsa daandii saffisaa Mojoo hanga Hawaasaaf jedhame karaa mana hojii abbaa taayitaa daandiiwwanii federaalaan tilmaamamuufis,kanfaltiin tilmaama lafichaa osoo hin kanfalamiiniif gara waggaa afuraffaatti cehaa jiraachuu dubbataniiru.
Mataa mataatti nama tokko tokkoof birrii kuma 200 fi isaa ol tilmaamni lafaa karaa abbaa taayitichaan tilmaamamuufi kan eeran jiraattonni kunneen bulchiinsa magaalaa Hawaasaa fi mootummaa naannoo Sidaamaaf irra deddeebiin gaaffii dhiheessaniiru.
Ta’us bajatni gadhiifamuu dhabuu hordofee akka harkifstee fi bajanni abbaa taayitaa daandiiwwanii federaalaa wayita ramadamutti akka kennanuufii isaanitti himamus hanga gabaasni kun qindaa’e Caamsaa 11 bara 2014’tti akka hin kanfalamnefii eeraniiru.
Jiraattotni naannawichaa itti dabaluunis lafa isaan jalaa fudhatamee irratti hanga ammaatti ijaarsi daandii bakki itti hin eegalamne akka jiruu fi misooma bu’uuraaf erga hin oollee lafichi akka deebi’uufiif gaafatanis suuta suutaan ijaarsa misooma bu’uuraaf akka oolu akka isaanitti himame ibsaniiru.
Abbaan taayitaa daandiiwwan federaalaa ijaarsa daandii saffisaa Mojoo hanga Hawaasaaf akka ta’u jedhamee lafti tilmaamame guutummaa guutuutti ijaarsaaf yoo hin oolle akka deebisuufi yookaan maallaqni tilmaamame akka kanfalaluufi Jiraattotni komii dhiheessan gaafataniiru.
Daayrektarri sabqunnantii uummataa abbaa taayitaa daandiiwwanii federaalaa Saamsoon Wandimuu gama isaaniitiin sababa ijaarsa daandiitiin komiileen tilmaama bakka mana jireenyaas ta’e,lafaa wayita aanaaleen ragaa qopheessuun mana hojii abbaa taayitichaaf ergan kanfaltiin kan kanfalamu ta’u eeranii,dhimma namoota komii dhiheeffatanii garuu hanga yeroo gaaffii kana gaafatamaniitti odeeffaannoo kan hin qabne ta’uu eeraniiru.
Komichaaf xiyyeeffannoon kennuun qaamolee dhimmi isaa ilaallatu waliin mari’achuun komiin dhihaate dhugaa yoo ta’e, Jiraattota lafti isaanii fudhatame waliin mari’achuun adeemsi kanfaltiin itti kanfalamu ni mijata jedhaniiru.
Hoggantichi dabalataanis Abbaan taayitichaaf hanqina bajataatiin naannolee Itoophiyaa garagaraatti akkuma namootni dhuunfaa kanfaltiin beenyaa lafaa osoo hin kanfalamiin jala harkifatu hunda,qaamoleen beenyaan lafaa ykn bakkaa kanfalamuufii hin qabne gaaffii fi komii dhiheessanii akka jiranis eeraniiru.
Qaama Piroojektii Daandii Mojoo hanga Hawaasaa kan ta’an daandiin kanfaltii saffisaa Mojoo hanga Baatuu sirni kanfaltiin itti raawwatamu guutameefi Fulbaana 10 bara 2014 tajaajilaaf banaa ta’uun isaa ni yaadatama.
Daandichi dheerina 92km kan qabu yoo ta’u,buufataaleen kanfaltii sadarkaa isaanii eeggatan Shan xumuramuun tajaajilaaf qophaa’aniiru.
Buufataaleen kanfaltii kunneenis buufataalee bahinsaa Mojoo,Qooqaa Bootee fi Baatuuti.
Hojiilee hojjetamaan keessaa buufataaleen kanfaltii Shanan, gamoo yaaliin itti gaggeeffamuu fi bakki cisicha hojjettootaa,gaarajii,teeknooloojiiwwan sakkatta’insa nageenya konkolaattota fi bakki kanfaltiin itti raawwatamu xumuramuun gara hojiitti galuun ni yaadatama.
Previous articleWalabummaa pireesii sodaa keessaa hin baane